Kunombono wokuthi ukuthambekela kokuguquka kunomuntu okwedlula kunowesifazane. Yisho ukuthi isimo semasimini sinehlukile kakhulu emvelweni, kunesifazana, futhi ukulangazelela ukukhwabaniswa kwalowo muntu kubekwe ngqo kwizinga lofuzo. Kodwa izibalo zifakazela ngenkani - ukuhlukunyezwa kwabesifazane akuyona into engavamile.
Phakathi kwezizathu zokuhlukumezeka kukhona: umhawu, ukukhukhumeza, ukuzethemba. Bavimbela ukungathembeki: uthando, inhlonipho, imfundo eyisisekelo ekugcineni.
Kokubili kokuhlelwa kwamadoda nabesilisa, ngokuvamile kuvame ukuhlangabezana nombono ophikisanayo wokuthi amadoda angase abe ngamacala kunabesifazane ngendlela yabo. Ungakwazi futhi ukuqonda uma ubuwula obunjalo abameleli bobulili obunamandla bezama ukududuza futhi baziphendulele. Akucaci lapho abesifazane abathanda abesifazane bebhala okungenangqondo. Njengokuthi kukhona into enjalo yowesifazane ongamenza afise owesilisa oyedwa isikhathi eside kunalokhu umuntu angathanda owesifazane oyedwa. Ubuhlobo bobulili besilisa nabesifazane bufana nalokhu. I-monotony yokusebenzisana okuhlala njalo iholela ekukhuleni kwesidingo sangempela semvelo sezinto ezintsha kanye nobuhle bezinzwa. Ubunzima bokuphendula buvuthwa, ngoba izamukeli zezinzwa zenza ngokuvumelana nesimiso esisodwa, kokubili amadoda nakwabesifazane. Futhi umuntu uzokwenzenjani, ukuthi ukuziphatha kwakhe ngokobulili kumlingani ohlala njalo kudonswa, kodwa ngesikhathi esifanayo awufuni ukuhlukanisa nalo mlingani? Yiqiniso, iTutu eyodwa indlela yokuphuma yizingxabano. Ngakho ukukhuluma, ukuze ungalahlekelwa ikhala.
Kodwa kungani amadoda engathetheleli ukuphinga kwabesifazane?
Ngokombono wezinhlolovo eziningi, lapho bacela khona amadoda nabesifazane ukuchaza izizathu ezabaholela ekuguquleni. Amadoda avame ukumbozwa ngeqabunga lomkhiwane wezidingo zocansi. Ngokuvamile, isidingo esinjalo, esingaxhunyiwe okunye (ngezimzwelo noma isidingo sokukhulumisana okungokomoya), sinelisekile ngabalingani abavamile, abangabafundi abangajwayelekile (1/3 kuzo zonke ukukhwabanisa), noma ngezikhathi ezinqunyelwe, ezingenasici nezibophezelayo ngokuma kwesikhathi eside abangane, osebenza nabo, abafazi bamngani, njll (izinguquko ezingu-1/4).
Amadoda nawo ayenzela ukuhlukumezeka, ecatshangelwa ukungabi khona komuntu ohlala isikhathi eside noma ngisho nesikhathi esifushane sokuhamba naye: ukuhamba ebhizinisini, eholidini, nokunye. Ukuhamba komfazi noma umngane osunaphakade kuthathwa njengamanye amadoda ayebuzwa njengesizathu esanele sokushintshwa kwakhe okwesikhashana kwesinye. Futhi bathi abesifazane banengqondo engavamile. Futhi ukubhekisela kokuthi ukukhwabanjwa ngokuvamile kwenzeka endaweni yokudakwa ngokweqile kuhlangatshezwa kaningi. Kodwa-ke, lesi simo sibizwa ngokucacile ngokuthi isimo esiyinkimbinkimbi.
Ukuthandana nomunye owesifazane njengesizathu sokungathengi kubizwa kuphela kwabayishumi abaxoxwa ngamadoda. Ngakho-ke kuvela ukuthi amadoda amthandabuzana ayidlala indima yokugqugquzela.
Kwabesifazane, isimo sihluke ngokuphelele. Ukukhwabanisa kwabesilisa kuvame ukususelwa ekukhuleni, uma kungenjalo uthando olusha, ngakho-ke, ngothando. Futhi iphutha lento yonke kanye nesisusa sezingxenye ezimbili kwezintathu kuzo zonke ukuphinga kwabesifazane ukungahlali okungapheli emshadweni. Kulapha ukuthi impendulo yombuzo: "Kungani abantu bengasithetheleli ukuphinga kwabesifazane?" Yebo ngoba ukuhlukumezeka kwabesifazane kunesisekelo esingathí sina, khona-ke lona wesifazane wathola enye indoda engaba yinto engcono kakhulu. Futhi lokhu akunakwenzeka ukuziqhenya komuntu. Ngakho-ke, amadoda angathetheleli. Kulula ukuhlukanisa nomfazi othandekayo kunokuba uhlale ukhathazeka ngokuhlukumezeka. Futhi uma umuntu enombono ophilayo futhi njalo eveza owesifazane wakhe ezandleni zomunye, khona-ke lapha-okungenani inhlamvu ebunzini. Phuma ebusweni bami, engalungile, noma embi kakhulu!
Isimo sengqondo sokuhlukunyezwa kwabantu
Yeka ukuthi ungahambi kanjani ngemuva kokuhlukanisa nomuntu othandekayo wakho
Kungani owesifazane ekhohlisa umyeni wakhe?
I-saumon esiphundu ibhaka kuhhavini
Indlela owesifazane oziphatha ngayo namadoda emsebenzini
Izizwe ezikude kakhulu
I-Christmas Star Cookies
Amakhekhe we-Chocolate nge-curd amabhola
Usizo ekukhetheni i-puppy
Ukunakekela kahle kwe-nail ekhaya